Shiinaha wuxuu ku iftiiminayaa Warshadda Filimka Madoow iyo soosaarayaasha | Grand Luminous
Filimka Photoluminescent PVC
Naqshad isu-dheellitiran oo ku jirta filimka mugdiga ah, filimka dhalaalaya, foornada Luminescent
Filimka 'photoluminescent PVC' waa badeecad luminescent ah oo lagu saleynayo midabka loo yaqaan 'photoluminescent pigment', Waa filim photoluminescent ka samaysan caag jilicsan, oo lagu taageeray warqad dhejis ah, oo aan waxyeello lahayn oo aan dhib lahayn. Malaha wax walxo shucaac ah waxaana lagu gartaa nuugista iftiinka degdega ah. Xaashiyaha daabacaadda daabacaadda silk iyo daabacaadda Ink-jet iwm.
Faahfaahinta iyo farsamada
Lakabka dhalaalaya oo leh soojiidinta dambe.
50mitir, 10mitir badanaa.
Habka Tijaabada: DIN67510 Qaybta I (Mcd / m2)
Nalalka (5 daqiiqo kadib iyo 60 daqiiqo ka dib)
Waqtiga suuska: (Daqiiqado)
Ogeysiis: 1. Filimyada cayiman ee gaarka ah ayaa si gooni ah loo soo saari karaa si loogu waafajiyo shuruudaha macaamiisha
2. OEM waa la oggol yahay
1.Photoluminescent vinyl filimka laga sameeyay caaga PVC wuxuu u adkeysan karaa ololka ilaa xad.
2. Awood u yeelan karo inuu iska caabbiyo xalka cusbada iyo saabuunta lagu dhaqo (waxaa lagu dhaqi karaa saabuun);
3.Qaqulka kuleylka iyo qabow heerkulka u dhexeeya -20 illaa 50 ℃;
4.Shaqaalaha muuqaalka jirka iyo farsamada;
5.Waxaa lagu dhejiyaa isla markiiba oo lagu dhejin karaa dusha sare ee waxyaalaha guud
Ka dib markii filimka loo jaro qaabab gaar ah, waxaa lagu dabaqi karaa xaaladaha soo socda:
1. Muujiyeyaasha Goobta: Waxaa loo adeegsan karaa dusha sare ee walxaha soo socda: beddelidda qalabka korantada, goleyaasha koontaroolka fog, darbiyada derbiga, tuubooyinka, weelka wax lagu qaado, qufulka, guluusyada gacanta, gacanta albaabka, qalabka gacanta, bakhtiiyaha dabka, qalabka digniinta dabka, aaladda badbaadinta, aaladda badbaadinta badbaadinta. , iwm. Calaamadaha laga sameeyay filimka 'photoluminescent vinyl' waxaa lagu dhejin karaa meesha ay sheygu ku yaalliin si loogu talagalay hawlgal ku habboon.
2. Calaamadaha Amniga: Waxaa lagu dabaqi karaa meelahan soo socda si ay u bixiyaan tilmaanta nabadgelyada iyo diirimaadka: Ka bixitaannada degdegga ah iyo marinnada, saldhigyada dhulka hoostiisa mara, marinnada dhulka hoostiisa mara, mashaariicda difaaca hawada madaniga ah, baararka kafeega iwm, hoolalka qoob ka ciyaarka, shineemooyinka, dukaamada waaweyn. , isbitaalada, saldhigyada tareenka, gegada diyaaradaha, boosteejooyinka, iwm.
Ogeysiisyada iyo Ogeysiisyada Loo Isticmaalo:
Waa in lagu dabaqo si siman ugu fidsan dusha heerkulka 10 ~ 40 ℃.
Photoluminescent-vinyl vinyl ayaa loo gooyn karaa qaabab kala duwan oo lagu dhejin karaa meel gaar ah (sida taleefanka oo la gooyo, badal, iwm) qurxinta iyo muujinta.
Photoluminescent is-isku dhejinta vinyl dusha sare waxaa lagu daabacan karaa shaashad xariir ah ama eray si ay u yeeshaan saameyn iftiin leh.
Marka filimka lagu dabaqo dusha shay kasta, waa in la nadiifiyaa oo aan ka madax bannaan wasakhda saliidda, boodhka, iyo wixii wasakh ah.
Sababta oo ah filimku wuxuu ku fidaa kuleylka iyo shukulaatada qabow, si taxaddar leh ayaa looga baahan yahay filimka ka dib goos goos gaar ah. Dhanka kale, waa in lagu dhejiyo ama lagu cadaadiyo culeyska si looga hortago dhalanrog iyo isjiidjiid.
Waraaqda dambe ee filimka waa in laga saaraa kahor isticmaalka. Filimka waa in lagu adeegsadaa si looga diido dusha sare ee saxaafadda. Ogeysiis gaar ah waa in la siiyaa geeska iyo geeska filimka inta lagu gudajiro dalabka.
Si loo dammaanad qaado iftiinka, taranka loo yaqaan 'photoluminescent-vinyl' ee taxanaha isku mid ah ayaa yeelan doona kala duwanaansho midab leh marka loo eego tiro fara badan. Fasax u gaar ah oo loo yaqaan 'photoluminescent vinyl' ayaa ka badan 10M dherer ahaan, waxaa jiri doona isgoyska goynta.
Filimka haray (liiska) ka dib dalabka waa in loo xiraa sida ugu adag ee suuragalka ah.
Xirmooyinka & Kaydinta:
1.Package: kitaab duuban ama xaashi ah, oo dibedda gudaha ku duuban filim caag ah
2.Soorage: waxaa lagu keydiyaa hawo qabow, qalalan, iyo bakhaar qabow oo heerkulkiisa jawigu yahay 10-40 ℃ iyo qoyaan ku dhow 70%.
Iftiimin huruud ah-cagaar, buluug ama buluug-cagaaran iyadoo la tixraacayo baahiyahaPVC agab ama PET, acrylic avaiableAdhesive back, ku habboon daabacaadda xariir, 100cm x 25mitir mid walboo rogaya, ama gooya sida loogu baahan yahay macaamiisha.luminance: PSPA BC, D iwm.
acrylic Avireed Guluubka gadaal
Shayga No :: YML-100M
ku habboon daabacaadda silk iyo daabacaadda Ink-jet
YML-200M Iftiimin cagaaran-jaalle ah ama buluug ama buluug ah 0.35 ~ 0.5mm dhumuc ka sameysan walxaha PVC ama PET